अधिकारका लागि बिदेशबाटै संघर्ष गर्छौ
हुम सुनारी मगर कुनै नौलो नाम होइन । उनि नेपालको जनजाति आन्दोलनलाइ बिदेशमै बसेर पनि संघर्षलाइ उत्कर्शमा पुर्याउन अहम भूमिका निभाउने एक हस्तिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
उनि साउदि अरबिया आदिवासी जनजाति महासंघका सस्संथापक अध्यक्ष हुँदै अैले यस सस्थाको दोष्रो कार्यकाल छदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको पनि उनि संयोजक हुन । समावेसी डटकम अनलाइनका लागी डण्डा गुरूङले लिनु भएको यो अन्तरबार्ता राज्यसत्ता डटकममा पनि पोस्ट गरिएको छ ।
१. नेपालमा अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बेलामा प्रवासमा रहेका आदिवासी जनजातिहरु संगठित हुनुको कारण के हो ?
नेपाली युवाहरूको बैदेशिक रोजगारको इतिहास ठ्याक्कै २०० बर्ष पुरानो छ । शुरुवातमा एकात्मकवाद राज्यसत्तालेसतप्रतिशत आदिवासी जनजातिहरूलाई बैदेशिक रोजगारमा जकाईयो । त्यसको गतिलो उदाहरण तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमसेरले बिठ्याँई गरि पहिलोर दोश्रो विश्वयुद्धमा आदिवासी जनजातिहरूलाई मात्र पठाईयो, त्यसको गतिलो प्रमाण हामीले सुरक्षित राखेका छौं । हामी उत्पीदनमा परेका लाखौं आदिवासी जनजातिहरू अहिलेआन्दोलित नभए अर्को ४०० बर्षसम्म यसरी नै प्रवासमा गुलामी बनिरहनु पर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न ।
बर्तमानसम्म पनि प्रवासमा लगभग ३० लाख भन्दा बढि उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरू बैदेशिक रोजगारमा आवद्ध छन् । जुन कुल बिदेशिने नेपालीहरूको ६५ प्रतिशत भन्दा बढि आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण आदिवासी जनजातिहरू माथि गरिएको विभेदीकरण र मुलुकमा लादिएको एकात्मकवाद नै हो । त्यसैले, ति विभेदीकरणको अन्त्य गर्न र सदियौं देखि लादिएको एकात्मकवादलाई ध्वस्त पार्न वरिष्ठ मानवअधिकारवादी नेता पद्यमरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनलाई हामी बिदेशमा स्थापित २२ महासंघहरूको एउटा संयुक्त सघर्ष समिति स्थापित गरि ऐक्यबद्धता जनाएर समर्थन, सहयोग र सहभागिता जनाएका हौं ।
२. नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्र चुपचाप रहेकै बेलामा विदेशमा रहेका २२ वटा शाखाहरु मिलेर भने संघर्ष समिति नै पुनर्गठन गर्नुभएको छ, यति हतारो किन ?
हामीले हतारो होईन, धेरै धिला गरिसक्यौं । यो आल्दोलन समिति धेरै अगाडि नै बनेर अहिलेसम्ममा एकात्मकवादीहरूलाई घुडा टेकाईसक्नु पर्ने थियो । महासंघ कै नेतृत्वमा धेरै अगाडि सम्झौताबिहीन निर्णायक आन्दोलनको घोषणा भईसक्नुपथ्र्यो । महासंघको असक्षमता र निर्णायक आन्दोलनमा होमिन आनाकानी गरेकोकारणले नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालको जन्म भएकोहो भन्ने मलाई लाग्या छ । म आफैले तीन महिना अगाडि नै महासंघ केन्द्रका अध्यक्षसँग परामर्श गरि सम्भावित आन्दोलनको लागि विदेशमा स्थापित महासंघहरूको भुमिकाकोबारेमा एउटा खाका नै तयार पारेर पठाएको थिए । तर, त्यसको कुनै आधिकारिक जवाफ महासंघको केन्द्रबाट आएन ।
आजको दिनसम्म नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्र किन चुप छन्, त्यो वहाँहरूले अविलम्ब जवाफ दिनुपर्छ, आम उत्पीडित आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई । तर, भन्नै पर्ने हुन्छ घोषणा गरिएकोआन्दोलन प्रति महासंघ, सङ्घीय परिषदले यतिका दिनसम्म चुप लागेर बस्नु महासंघका नेतृत्वहरू आफूआवद्ध दलहरूका वाहुन नेताहरूसँगको डर हो भन्ने लाग्छ । वहाँहरूलेदुईमा एक रोज्नुपर्छ – आल्दोलन या त उनिहरू आवद्ध राजनीतिक दल । विशेष गरि काँग्रेस र एमालेका वाहुन नेताहरूले लिएको नीतिलाई महासंघका नेतृत्वहरूले आत्मसात गरि हिड्दा सिङ्गोमहासंघकोनीतिलाई अवहेलना गरिएकोठहर्छ ।
३. केन्द्रको निर्देशन विपरित भएन र तपाईहरुको हतारो ? केन्द्र मातहत हो नि तपाईहरु त ?
हामी महासंघले लिएको नीति र महासंघको गत ९ औं महाधिवेशनले पारित गरेको१० बुधे घोषण पत्रको भावना अनुरूप अगाडि बढेका छौं । बरु, केन्द्रले महासंघको नीतिलाई कुल्चने प्रयास गरेको हामीलेमात्र होईन आम आदिवासी जनजाति अभियान्ताहरूले महशुस गर्न थालि सकेका छन् । तर, त्यसो नहोस् भन्ने चाहन्छौ हामी । अबिलम्ब महासंघ, सङ्घीय परिषदले बैठक आह्वान गरेर आन्दोलनलाई बिना शर्त समर्थन, सहयोग र सहभागिता जनाओस् भन्ने चाहन्छौ, हामी । नत्र, पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था वहाँहरूलाई आउन सक्नेछ ।
४. जनजाति महासंघ केन्द्रले अहिलेसम्म समर्थन नगरेपनि तपाईहरु अधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाललाई साथ, सहयोग र समर्थन गरेर जाने भन्दै हुनुहुन्छ नि ?
हो, हामी २२ देशमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ शाखाहरूको मोर्चा अन्तरराष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिले गत ९ नोभेम्वर २०१४ मै पहिलो साइवर बैठकको आयोजना गरेर मानव अधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाललाई बिना शर्त समर्थन, सहयोग र सहभागिता जनाउँने आधिकारिक निर्णय गरिसकेका छौं । हामीले मात्रै होईन, महासंघका सबैजिल्ला समितिहरूले पनि आन्दोलनमा जानेघोषणा गरिसकेका छन् त ।
हाम्रो केही दिनमा हुने अर्को बैठकले आल्दोलनलाई कसरी सहयोग र सहभागिता जनाउँन सकिन्छ भन्ने बिषयमा एउटा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने छौ। त्यसको लागि हामीहरू बीच अहिलेगृहकार्य भईरहेकोछ ।
५.आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा जनजाति महासंघ केन्द्रलाई तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मैले माथि नै प्रष्ट पारीसकेको छु । विभेदीकरणको अन्त्य, समाबेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपक्षता, एकल पहिचान सहितकोसङ्घीयता र सङ्घीयता सहितको संविधान नै आदिवासी जनजाति महासंघको वटम्लाईन हो। यि मुद्धाहरूमा दायाँबायाँ गरिए महासंघको औचित्य समाप्त हुन्छ । जुन नीतिलाई महासंघ, सङ्घीय परिषदको ९ औं महाधिवेशनको१०बुधेघोषणा पत्रमा प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसलाई महासंघका नेतृत्वहरूलेलत्याउन खोजिए उनिहरू माथि नैतिक र सैद्धान्तिक प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसो नहोस् भन्न चाहन्छौ हामी । बिनाशर्त अबिलम्व आन्दोलन प्रमुख हिस्सेदारी बन्न तयार होस् भन्छौ हामी ।
सैद्धान्तिकरुपमा हामी बिचलित छैनौं । प्राविधिक रुपमा केहि त्यस्तो ब्यवधान भए वहाँहरूसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिने भयो । श्रद्धेय नेता पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन समितिले पनि वहाँहरूलाई अबिलम्ब एक संयुक्त बैठकको आह्वान गरि बृहत छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेलाग्छ ।
६. तपाईहरु विदेशमा रहेर पनि आन्दोलनमा कुन रुपमा सहभागी हुने योननामा हुनुहुन्छ ?
यस बारेअहिले नै भन्न सक्नेअवस्था छैन । हाम्रोएउटा संयन्त्र बन्दैछ । त्यसले निर्देशित गरे बमोजिम हामी आन्दोलनमा सहभागि हुनेछौं ।
७. विदेशमा रहेका आदिवासी जनजातिसँग कुन रुपमा समन्वय गरेर अघि बढ्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
हामीले २२ महासंघ शाखाका अध्यक्षहरू सदस्य रहने गरि सचिवालय खडा गरेका छौं । केहि दिन भित्रै हुने तेश्रो साइवर बैठकले एउटा निर्देशिका तयार पारेर सोही अनुसार आन्दोलनमा सहभागि हुन बिदेशका महासंघहरूलाई निर्देशन जारी गर्नेछौ ।
Last Updated on Wednesday, 12 November 2014 16:39
संघियता, पहिचान र राज्यको पुनःसंरचना बारे : प्रश्न–उत्तर
संघियता, पहिचान र राज्यको पुनः संरचनाको विषयमा विभिन्न किसिमका कुराहरु देशका प्रमुख राजनीतिकदलका प्रमुख कहलिएका वा प्रभावशाली नेताहरुले बाहिर बोल्दा वा सूचना सम्प्रेशन गर्दा लाग्छ । उनीहरुले बोलेपछि जनादेश दिएका सबैले स्वीकार्छन जस्ता तर मलाई भने आफुले आफैलाई प्रश्न सोधी र उत्तर दिन मन लाग्यो ।
कसैले ४ प्रदेश कसैले ६ प्रदेश कसैले ७ प्रदेश कसैले १० प्रदेश कसैले संघियतानै चाहिन्दैन भनिरदा । पहिचान भनेको एकल जातिय राज्य अथवा जातिय नाम भएको राज्य त हामी स्वीकार्दैनौ आदि आदि भनी रहदा मलाई भने सोच र शैली यसरी फुर्यो ।
प्रश्न : पहिचान सहितको संघियता भनेको जातिय राज्य हो त ? भनी मेरो सोचलाई म आफ्फै सोध्छु ।
उत्तर : होइन ।
उसले एक शब्दमा उत्तर दिन्छ ।
प्रश्न : किन होइन ? भनी फेरि प्रश्न तेस्र्याउन मन लाग्छ ।
उत्तर : कसरी हो त ? प्रश्न तेस्र्याउने मन लाग्ने मन वा सोचलाई उल्टो म प्रश्न गर्छु । प्रश्न : ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, थारुहट, लिम्बुवान, किराँत के हो त ? ठोकुवा साथ भन्छु ।
उत्तर : त्यो जातिय राज्य होइन त्यो तत् तत् समुदाय वा जातिको भाषिक पहिचान युक्त शब्द चाहि हो । त्यो शब्दको अर्थ जातिय राज्य हुदै होइन । त्यसको अर्थ मुल रुपमा भूमि हो । बरु तपाई हामीले अहिले बोलेको, लेखेको प्रश्न उत्तर गरेको भाषालाई एकल जातिय राज्य भन्दा बरु सुहाउन सक्छ । फेरि यो पनि राज्य होइन । भाषा मात्रै हो । जसलाई नेपाली भाषा भनिन्छ । खासमा खष भाषा हो ।
एकल जातिय राज्य भनेको त त्यो एक वाट जात जसको भाषामा सबै राज्यको ठाउँहरुको नामकरण गरेको हुन्छ । सबैले त्यही भाषा बोल्नुनै पर्ने अनिवार्यता हुन्छ । त्यही एक जातको मानसहरु मात्रै राज्यको जुनसुकै ठाउँमा हालीमुहाली गरिरहेका हुन्छ । त्यो एक जातिको धर्म, भाषा, रितिरिवाज आदिलाई मात्रै राज्यले चिन्दछ वा राष्ट्रियकरण गर्दछ । त्यो एकल जातभन्दा अर्को जातिलाई समावेशीको नाउमा वा आरक्षणको नाउमा प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यस्तो राज्यको नियम कानुन भएको राज्यलाई एकल जातिय राज्य भन्ने हो । त्यो ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, थारुहट, लिम्बुवान, किराँत आदि ऐतिहासिक भूगोलको भाषिक नाम हो । त्यो एकल जातिय राज्य होइन ।
त्यसपछि मेरा सोच फेरि होइन रहेछ भन्नेमा पुग्छ तर पनि अर्को प्रश्न सोध्छु । प्रश्न : होईन भने किन जातिय राज्य भनी सबैले भन्न थाले त ?
उत्तर : सबैले भन्न थालेको होइन । जसले अरुलाई अधिकार, त्यसमा पनि संघियता, समावेशी र स्थानीय स्वायत्तता शैलीको जो अधिकार छ, त्यसलाई स्थापित गर्न नचाहिनेहरुले पहिचानलाई जातिय राज्यसँग गाँसेर गुमाउरो पारामा पहिचानलाई जातिय राज्यको दोष लगाईएको हो । त्यस्ता तत्वहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाललाई यथास्थितिमै राख्न चाहेको हो र छ ।
मेरो एक सोचको उत्तरले म फेरि ठ्वाँ पर्छु । फेरि अर्को जिज्ञासा पलाउछ ।
प्रश्न : त्यसो भए पहिचान एकल वा बहु-बहुल हुन्छ त ?
उत्तर : हुन्न । बरु साझासम्म हुनसक्छ । सोच विचार गरी भन्छु । प्रश्नले मेरो पिछा छोड्दैन ।
प्रश्न : साझा पहिचानको एउटा उदाहरण दिनुस् त ? उत्तर पनि सँगसगै फुर्छ ।
उत्तर : मानिसहरुको व्यक्तिगत पहिचान एकलनै हुन्छ । त्यसमा कुनै दुबिदा रहेन । तर त्यो मानिसहरु बासोबास हुने समाज वा सामाजिक स्थान वा ठाउँ वा क्षेत्र वा प्रदेश कलान्तरमा साझा हुन्छ । जस्तो ताम्सालिङ भन्ने ठाउँमा तामाङहरु मात्रै हुँदा एकल जातिय पहिचान युक्त राज्य भन्न सुहाउला तर अहिले त्यहाँ अन्य जातजाति समुदायहरु पनि बसोबास गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा त्यस स्थान वा ठाउँ वा क्षेत्र वा प्रदेशको नामाकरण ताम्सालिङ नेवा बाग्मती वा ताम्सालिङ शैलुङ नेवा वा ताम्सालिङ बाम्मती वा ताम्सालिङ शैलुङ राख्दा साझा पहिचानको राज्य वा प्रदेश हुन्छ ।
प्रश्न : संघियता किन चाहियो त ?
उत्तर : स्वाशासनको लागि ।
प्रश्न : स्वाशासन किन फेरि ?
उत्तर : आत्मासम्मानको लागि ।
प्रश्न : आत्मासम्मान किन ?
उत्तर : देश, राज्य, ठाउँ, स्थान, प्रदेशको विकास गर्न ।
प्रश्न : विकास त्यतिकै हुन्न ?
उत्तर : भएन त अहिलेसम्म । त्यसैले संघियता चाहिएको हो ।
प्रश्न : त्यसो भए मानौ ताम्सालिङ भनेको जातिय राज्य वा प्रदेश होइन ?
किन भने–तामाङ जातिको भाषाबाट “ताम-तामाङ” भनेको तामाङ भाषा बोल्ने-तामाङ जाति बढी बासोबास हुने ठाउँ वा तामाङहरुको बाहुल्यता भएको र त्यो भाषा तथा अन्य भाषा बाल्ने मानिसहरुको पुख्र्यौली थात थलो अनि “सा” भनेको भूमि-जमिन-ठाउँ र “लिङ” भनेको प्रदेश-क्षेत्र हो । त्यसो हुँदा त्यो तामाङ जातिको मात्रै जातिय राज्य भन्ने हुन्न । त्यसको अर्थ भूमि-ठाउँ-जमिनको प्रदेश भनेको हो । किनभने विना जमिनको क्षेत्र अथवा प्रदेशलाई पनि तामाङ जातिको भाषामा प्रचलित छ जस्तो “नाम्गईलिङ” भनेको आकाश प्रदेश हो । “जाम्बुलिङ” भनेको सारा भूमि वा पृथ्वी प्रदेश हो ।
यसरी मैले मेरो सोचसँग भलाकुसारी गरीरहदा-भईरहदा संविधान सभानै पो फेरि भंग भईसक्छ कि । मलाई डर लाग्छ ।
घ्याङसुकाठोकर–५, दोलखा, हाल काठमाण्डौ
Last Updated on Wednesday, 29 October 2014 20:48
राष्ट्रिय राजनीति लिम्बुवानी मोडेलको !
साउनको तेस्रोसाता नेपालको पूर्वी जिल्लाहरुमा सक्रिय अर्थात् लिम्बुवानवादी पार्टीहरुबीच एकता भएको छ । यसअघि विभिन्न कारणले विभक्त भएका पाँच लिम्बुवानवादी पार्टी एकीकरण भएर संघीयता लिम्बुवान पार्टी बनेको छ । जसको नेतृत्व सोहीक्षेत्रमा सशक्त नेता मानिनुहुने कुमार लिङ्देनले गर्नुभएको छ । यो एकताले अबको दिनमा के राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्न सक्ला भन्ने आमजिज्ञासा पनि उठ्न थालिसकेको छ । पहिचानवादी शक्तिहरुको मिलनले सकारात्मक सन्देशका साथै तमुवान, मगरात, नेवाःवादीहरुलाई उत्प्रेरणा गराउने अध्यक्ष लिङ्देनको ठम्याई छ । उहाँका अनुसार एकतापछिको नयाँ पार्टीले सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको समेत बताइएको छ । प्रस्तुत छ, संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका अध्यक्ष लिङ्देनसँग पार्टी एकता र भावी योजनाबारेगरिएको कुराकानी :
लिम्बुवानी पाँच पार्टीबीचको एकताको म्यासेज के हो ?
यसले समग्र लिम्बुवानी आन्दोलन र सिंगो देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यन्त सकारात्मक सन्देश गइरहेको छ । खासगरी लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, नेवाः खसान, मैथिलीका लागि लड्ने जनताहरु, नेतृत्वहरु मिल्न सक्दैनन्, आपूm आपूmमा झगडा गरिरहन्छन्, विभाजित छन्, मिल्न सक्दैनन् । कमजोर छन् भन्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रि«य आंकलन थियो, अब त्यो तोड्ने काम भएको छ ।
अब लिम्बुवानीहरु एक हुन सक्छन्, नेवाःहरु एक हुनसक्छन्, तमुवान, खम्बुवानीहरु एक हुन सक्छन् र सबै संघीय छातामुनी एक हुन सक्छन् । आदिवासीहरुमा वास्तवमै यो देशमा ठूलो पावर छ । उनीहरु स्टेक होल्डर हुन् । उनीहरु आप्mनो मुक्तिका साथसाथै सिंगो नेपाललाई २१औं शताब्दीअनुसार नयाँ कोर्षमा, बाटोमा लान सक्छन् भन्ने सन्देश पनि गएको छ । मान्छेहरुमा त्यो उत्साह एकतापछि मैले पाएको छु ।
क्षेत्रीयतावादी पार्टीको आरोप लागिरहेकै छ, अब यो एकतापछि मूलधारको राजनीतिमा प्रभाव देख्न सकिएला ?
एकदमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको कार्यदिशा के हो त ? मुख्य काम भनेको पहिचानसहितको संविधान लेख्ने हो । सिंहदरबारमा जाने राष्ट्रपति हुने, प्रधानमन्त्री हुने, गृहमन्त्री हुने, बाँडीचुँडी खाने, थर्काउने, आप्mना डनहरु राख्ने काम त वि.सं. २००७ सालदेखि हुँदै आयो । अब त्योबाट मुक्त हुँदै देश नयाँबाटोमा जान चाहन्छ, संकल्प र संघीयताको बाटोमा ।
त्यसमा पनि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचानसहितको संघीयतामा जान चाहन्छ । यहाँ ताम्सालिङ, लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, मगरात, तमुवान, मैथिली, खसान राज्य बन्न चाहन्छ । राष्ट्रको माग त्यो हो । अब पूर्वको लिम्बुवानबाट एकदमै सकारात्मक आशाको बत्ति बलिसक्यो । जुन ढंगले एकात्मकवादीहरुले पहिचानवादी सिध्यायौं भन्ने दिवास्वप्न थियो, त्यो चकनाचुर हुन्छ ।
यदि हाम्रो लिम्बुवानको माग, तमुवानको मागलाई अस्वीकार गरिन्छ भने, यो देशका आदिवासी जनजाति, उत्पीडितहरुको, खम्बुवान, मगरात र थरुहटहरुको हाम्रो सपना, आकांक्षालाई उहाँहरुले च्यातच्यूत पार्न खोज्छ भने उनीहरुको कथित सपना र आकांक्षा कुनै पनि हालतमा पूरा हुन दिँदैनौं । यदि देशलाई सफल बनाएर एकात्मकवादीहरु सफल हुनुछ भने हामीलाई पनि सफल बनाउनुपर्छ । हाम्रो सपनालाई पनि उनीहरुले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र उनीहरुको सपना पूरा हुन्छ ।
एउटाको सपना हाँसिरहने, अर्कोको सपना बागमतिमा बगिरहने अवस्था यो देशले अब थेग्न सक्दैन । हामी त्यसलाई सहने पक्षमा छैनौं । सबैको सपनाको विजय हुनुपर्छ । सबैको आकांश पूरा हुनुपर्दछ । मैले महत्वकांक्षाको कुरा गरेको छैन, आकांक्षाको कुरा गरेको हुँ । हामीसँग यो देशलाई यहाँदेखि यहाँसम्म लैजान सकिन्छ भन्ने एउटा सपना छ, त्यो सपना पूरा हुन पाउनुपर्छ । लिम्बुवानको त्यो सपना पूरा हुन पाउनुपर्छ । हामीलाई पनि मीठो निदमा निदाउन दिए मात्र आगामी दिनमा सिंहदरबार पनि मीठो निदमा निदाउन मिल्ला । होइन भने, अबको नेपालले एउटा हाँसिरहने, अर्को रोइरहने थेग्न सक्दैन ।
फरक पृष्ठभूमिको पार्टीबीच एकता कसरी सम्भव भयो ?
वीर नेम्वाङ दाइ, ०३३ सालबाटै लिम्बुवान आन्दोलन सुरु भएको थियो । ०४३ सालमा अलि घनिभूत भएको थियो । मैले नेतृत्व गरेको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, सञ्जुहाङ पालुङ्गजीले नेतृत्व गर्नुभएको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, रामभक्त कुर्माङजीले नेतृत्व गर्नुभएको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल, कमल छाहाङजीले नेतृत्व गर्नुभएको संघीय गणतान्त्रिक पार्टीको एकता हो । हाम्रो पार्टी ०६२÷६३ यता घनिभूत बन्दै आयो ।
इतिहास र वर्तमान अवस्थालाई मिलाएर लैजानुपर्ने छ । तर पनि लिम्बूवानी जनताको चाहना, लिम्बुवानको आप्mनै इतिहास छ । हामीले धेरै अनुसन्धान ग¥यौं । हामीले लगभग लगभग १७०४ को. आन्दोलन सम्झियौं । त्यसपछि वि.सं. २००५÷६ तिर देहवसान हुनुभएका महागुरु फाल्गुनन्दलाई सम्झियौं । उहाँ राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्छ । उहाँको योगदान र संघर्ष केका लागि थियो त ? १८ सय ३० मा सहिद भएका कामेश्वरीहरुलाई सम्झियौंं । २००८ सालतिर लिम्बुवान सुधार संघ खोलि हिँडने किराँतविद् इमानसिंह चेम्जोङहरुलाई सम्झियौं ।
आखिर उहाँहरुको लडाइँ कुनै मन्त्रीको लागि थिएन, सभासद्को लागि थिएन । पूरै लिम्बुवानका आदिपुरुष, महामानवहरुको संघर्ष लिम्बुवानको आइडेन्टीटी, लिम्बुवानको स्वराज अर्थात् स्वायत्तताको लागि थियो । भनेपछि हामी दुई चार कुरामा किन ¥याल चुहाउने ? हामी त महान् लिम्बुवानको पुत्र, पुत्रीहरु हौं । सन्तान हौं । राष्ट्रले नयाँगति लिन लागेको बेला सानातिना कुरालाई बिर्सेर एक भएर जानुपर्छ । जसले राष्ट्रलाई पनि निकास दिन्छ भन्ने मुख्य दर्शन, आदर्शभित्र रहेर हामी साउन १८ र १९ गतेको बैठकबाट एकीकृत भयौं ।
एकीकरणका लागि पहिले संवाद समिति, विज्ञ टोली थियो, जसले पार्टी एकतालाई सहज गराइदिए । लामो छलफल, बहसको प्रक्रियापछि हामीले एकीकरणसम्म आइपुगेका हौं । यसबाट अब खम्बुवान पनि एकीकरण हुँदैछ । किराँत, ताम्सालिङ, नेवाःमा पनि धेरै शक्तिहरु छन्, मधेस तराईतिर धेरै शक्ति छन् । अब सबैलाई लिम्बुवानको एकताले उत्प्रेरणा जगाइदिएको छ । सबैमा एकीकरणको सम्भावना बढेर गएको छ ।
कस्तो प्रकृतिको आन्दोलन, विचारको कि सडकमा ?
लिम्बुवान र राज्यबीच धेरै खालका सहमति भइसकेका छन् । त्यो सहमति आन्दोलनको बलबाट भएको हो । एकताअगाडि विभिन्न पार्टीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हाम्रो माग हो । सहमति गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने मनपरीतन्त्र छ ।
अब त्यस्तो अवस्था हामी मान्दैनौं, जुन जुन सहमति भएको छ त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्छौं । त्यो लागू हुनुपर्छ । हाम्रा नेता, कार्यकर्ताहरु जेलमा हुुनुहुन्छ । उहाँहरुको रिहाईको सहमति भएपनि अहिलेसम्म केही भएको छैन । त्यो कामहरु तत्काल गरियोस् भन्ने मागसहित त्यही सहमतिमा टेकेर हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्नेछ ।
लिम्बुवानी नेतृत्वलाई आफुङ्गी अथवा संकीर्ण सोचाई छ भन्ने आरोप लाग्नेगर्छ, त्यसलाई कसरी तपाईंहरु चिर्नुहुन्छ ?
आफुङ्गी नै त नभनौं । विश्वका अरु देशका नागरिक नेपालीको स्वभाव मिल्दैन नि ! किनभने हामी अमेरिकामै गएपनि नेपाली हुँ भन्ने गर्व हामीमा रहन्छ । अष्टे«लिया, यूकै जहाँ जानुस् नेपालीहरुको आप्mनै स्वभाव हुन्छ । त्यस्तै भूमि हो, लिम्बुवान । लिम्बुवानी जनतामा त्यो केही स्वभाव छ । हिजो हिन्दूधर्मको प्रभाव आयो, बुद्धधर्मको प्रभाव आयो, मुस्लिमको वेव आयो, त्यसको बाबजुद पनि लिम्बुवानमा विश्वको ग्लोबलाइजेसनले कुनै असर पारेन । लिम्बुवानीहरु कुनै डोमिनेसन परेको छैन । त्यसकारण लिम्बुवानी जनतामा एक खालको स्वभाव छ । त्यो एउटा गर्व छ ।
त्यसैले हामी सबैले लिम्बुवानलाई प्राथमिकता दिएका हौं । लिम्बुवान एकताले अन्य तमुवान, मगरात, नेवाः लगायतमा सकारात्मक असर पार्ने विश्वास गरांै । म देश, विदेशमा रहेका सारा नेपालीलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो एकता टुट्ने छैन । कम्तिमा पनि हामी नेपाल र नेपालीलाई एसियाली मापदण्डमा पु¥याउन सक्दैनौं, तबसम्म यो एकता टुट्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
विभिन्न पार्टीका नेतृत्वको आप्mनै खालको आचारण छ, त्यसले भोलि समस्या आउने आशंका गरिएको छ नि ?
यो एकदमै राइट कोइसन । किनकि वीर नेम्वाङ एउटा हस्ती हो । सञ्जुहाङजी, कमलजी, रामभक्तजी आप्mनै इतिहास बोकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैलाई साथमा लिएर जानुपर्छ । म अध्यक्ष मात्र छैन, हाम्रा महासचिव सूर्य माखिम, खगेन्द्र मामिख हुनुहुन्छ । आन्दोलनमा धेरै योगदान दिनुभएका साथीहरु हुनुहुन्छ । सबै साथी र उमेर समूहको नेतृत्व आएकाले मै सबैसँग छलफल र परामर्श लिएर संघीय लिम्बुवान पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वको आधारमा मिलाएर लाने सोचमा छु । त्यसो भएपछि मनमुटाव गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।
समावेशी पार्टी देखिएन, यो समस्या कसरी हल गर्नुहुन्छ ?
यो कुरा एकदमै आएको छ । भेँडेटारमा हाम्रो पार्टी एकीकरण पछि देश विदेशबाट यो कुरा एकदमै आयो । सबै लिम्बुवानी आन्दोलनका शुभेच्छुकहरुले सबै ठीक छ तर समावेशीकरण भएन भन्नुभएको छ । आपैंm पहिचान र समावेशी, समानुपातिकको कुरा उठाउने त्यही लिम्बुवानमा पाँचवटा पार्टी मिलेर बन्दा समेत समावेशी नहुनुमा हामीलाई पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले देखिने गरी समावेशी बनाउँछौं ।
अहिलेसम्म त्यहाँ बसेका अन्य जातजातिले लिम्बुवानी आन्दोलनलाई आत्मसात गर्न नसक्नुको कारण ?
अहिले एकीकरण भइसकेपछि धेरै ठाउँबाट साथीहरु अब हाम्रो भूमिका के हुन्छ, हामीलाई कसरी समेटेर लानुहुन्छ ? हामी धेरै सकारात्मक छौं भनिरहनुभएको छ । हिजोका दिनमा दुखद् रह्यो हामी एक रहन सकेनौं ।
अब लिम्बुवानमा नसोचेको स्थिति आउँछ । त्यो नकारात्मक सोचले भनेको होइन, एकदमै सकारात्मक वातावरण बन्दै जानेछ । लिम्बू र गैरलिम्बू जनताहरु, गैरआदिवासी जातिहरुमा पनि हामी यत्ति मजाले अगाडि बढ्नेछौं । जुन देखिने र अर्थपूर्ण दुवै खालको समावेशीकरण हामी चाँडै गर्दैछौं ।
लिम्बुवानबासीले तपार्इंहरुको पार्टीलाई विश्वास नगर्नुको कारण के रहेछ ?
पूरै विश्वासै नगरेको त होइन । हाम्रो पार्टी एकीकरण नहुँदैमा पनि चर्चामा थियो । हामीले त्यत्रो मार्चपास, सभा, सम्मेलन, आन्दोलन ग¥यौं । विभिन्न चरणमा सरकारसँग वार्ता र सहमति ग¥यौं । आन्दोलन नै नउठेको भन्ने होइन । तर, पनि जनताहरुले एकीकृत भएर आऊ, एक भएर आऊ हामी सपोर्ट गछौं भनिरहनुभएको छ ।
विभाजित हुनुचाहिँ एउटा दुखद् पक्ष थियो । तर जनताको मागलाई पूरा गराउन र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्न हामी एक भएका छौं । अब ठीक हुन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने नीति के छ त ?
बैठकमा यो कुरा जोडतोडले उठेको छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा संघीय शक्ति चाहिन्छ भन्ने । हामी त्यसमा सकारात्मक हुने कुरा भइनै हाल्यो । छलफल चलिरहेको छ र त्यो हुन्छ नै । लिम्बुवान एउटा शक्ति भइहाल्यौं । अब यहाँका सबै संघीय शक्तिहरुलाई जोड्ने एउटा मेकानिज्म हुन्छ । यसअघि पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले त्यसको अभ्यास गरेकै हो । त्यो रहिरहेको भए यतिखेर करिब ६० जना सभासद् हुन्थे । त्यो एउटा जबर्जस्त कन्सेप्ट थियो । त्यसमा केही सुधार गरेर फेरि पनि अगाडि बढ्नेछांै ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोट पाउनुको कारण गुजरात मोडेल बन्यो । अहिलेको एकतापछि पनि मगरात, तमुवानले हामीलाई एकता गराउन आइदिनु प¥यो भनिरहेको छ । यो एकताले लिम्बुवानको आन्तरिक राजनीति, विकासलगायत हरेक विषयमा प्रभाव पार्नुप¥यो नि ! हिजो जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा हामी विभाजित भएकाले समस्या परेको थियो । अब गर्ने भनेपछि तत्काल हुने अवस्था बन्छ ।
अब राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि लिम्बुवानी मोडेल हुनेछ । लिम्बुवानी राजनीति अब चाँडै राष्ट्रिय राजनीतिमा रुपान्तरण हुँदैछ । यसका लागि हामी राष्ट्रव्यापी मेकानिज्म बनाउने भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । त्यसका लागि हुबहु नभए पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई आधार मानेर, सिकेर अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो सहमति छ ।
लिम्बुवानमा जन्मेका नेतृत्वले लामो समयदेखि देशको हालीमुहाली गरिरहेको छ, तर उनीहरु लिम्बुवान शब्द सुन्न चाहेको देखिन्न, किन ?
लिम्बुवानबाट आएका नेतृत्वहरु लिम्बुवानी जनता, दलित, उत्पीडितहरु केही होइनन् भन्ने दिग्भ्रमित सोचमा हुनुहुन्छ । गुजरातका मोदीजी आएर हाइहाइ भएर जानु भो आखिरी उहाँको संसद्को प्रस्तुति । उहाँलाई संघीयताले नै त्यहाँ पु¥याएको छ । लिम्बुवान नदेख्नु भनेको मोतियाविन्दु हुनु हो । मलाई लाग्छ, उहाँहरुको दिग्भ्रम चाँडै नै ठीक ठाउँमा आउनेछ ।
संविधान निर्माण जारी रहेको बेला तपार्इंंहरुको एकताबाट नयाँ बनेको पार्टीले कस्तो भूमिका रहला ?
संविधान निर्माणमा हामी एकदमै पोजिटभ छौं र हुनुपर्छ । हामीलाई पहिचानसहितको संघीयता चाहिएको छ । अहिले हामीमुहाली गरिरहेकाहरुलाई होइन, हामीलाई चाहिएको छ । तर सबै पक्षलाई बोलाएर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुप¥यो भन्ने पक्षमा हामी छौं । चुनाव नै सबै चिज होइन । हिजो पञ्चायतले पनि चुनाव जितेको थियोे । ज्ञानेन्दैको पालामा पनि चुनाव भयो । चुनावले नै सबै निकास दिने हो भने ०४६ सालदेखिको चुनावले के ग¥यो र ? जनयुद्ध, मधेस, आन्दोलन, लिम्बुवान किन भयो त । तर चुनाव नजित्दैमा लिम्बुवानको मुद्दा हार्ने भन्ने होइन । चुनाव त कुन सन्दर्भमा भयो, कसरी षड्यन्त्र भयो भन्ने हो । सर्वपक्षीय सम्मेलन छलफलका हो, हामीले बोलेको कानुन बन्नुप¥यो ।
- See more at: http://www.samabeshi.com/?p=60145#sthash.mQLr2pCx.dpuf
यसले समग्र लिम्बुवानी आन्दोलन र सिंगो देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यन्त सकारात्मक सन्देश गइरहेको छ । खासगरी लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, नेवाः खसान, मैथिलीका लागि लड्ने जनताहरु, नेतृत्वहरु मिल्न सक्दैनन्, आफू आफूमा झगडा गरिरहन्छन्, विभाजित छन्, मिल्न सक्दैनन् । कमजोर छन् भन्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय आंकलन थियो, अब त्यो तोड्ने काम भएको छ ।
अब लिम्बुवानीहरु एक हुन सक्छन्, नेवाःहरु एक हुनसक्छन्, तमुवान, खम्बुवानीहरु एक हुन सक्छन् र सबै संघीय छातामुनी एक हुन सक्छन् । आदिवासीहरुमा वास्तवमै यो देशमा ठूलो पावर छ । उनीहरु स्टेक होल्डर हुन् । उनीहरु आफ्नो मुक्तिका साथसाथै सिंगो नेपाललाई २१औं शताब्दीअनुसार नयाँ कोर्षमा, बाटोमा लान सक्छन् भन्ने सन्देश पनि गएको छ । मान्छेहरुमा त्यो उत्साह एकतापछि मैले पाएको छु ।
वीर नेम्वाङ दाइ, ०३३ सालबाटै लिम्बुवान आन्दोलन सुरु भएको थियो । ०४३ सालमा अलि घनिभूत भएको थियो । मैले नेतृत्व गरेको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, सञ्जुहाङ पालुङ्गजीले नेतृत्व गर्नुभएको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, रामभक्त कुर्माङजीले नेतृत्व गर्नुभएको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल, कमल छाहाङजीले नेतृत्व गर्नुभएको संघीय गणतान्त्रिक पार्टीको एकता हो । हाम्रो पार्टी ०६२-६३ यता घनिभूत बन्दै आयो ।
इतिहास र वर्तमान अवस्थालाई मिलाएर लैजानुपर्ने छ । तर पनि लिम्बूवानी जनताको चाहना, लिम्बुवानको आफ्नै इतिहास छ । हामीले धेरै अनुसन्धान गर्यौं । हामीले लगभग लगभग १७०४ को. आन्दोलन सम्झियौं । त्यसपछि वि.सं. २००५-६ तिर देहवसान हुनुभएका महागुरु फाल्गुनन्दलाई सम्झियौं । उहाँ राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्छ । उहाँको योगदान र संघर्ष केका लागि थियो त ? १८ सय ३० मा सहिद भएका कामेश्वरीहरुलाई सम्झियौं । २००८ सालतिर लिम्बुवान सुधार संघ खोलि हिँडने किराँतविद् इमानसिंह चेम्जोङहरुलाई सम्झियौं ।
आखिर उहाँहरुको लडाइँ कुनै मन्त्रीको लागि थिएन, सभासद्को लागि थिएन । पूरै लिम्बुवानका आदिपुरुष, महामानवहरुको संघर्ष लिम्बुवानको आइडेन्टीटी, लिम्बुवानको स्वराज अर्थात् स्वायत्तताको लागि थियो । भनेपछि हामी दुई चार कुरामा किन र्याल चुहाउने ? हामी त महान् लिम्बुवानको पुत्र, पुत्रीहरु हौं । सन्तान हौं । राष्ट्रले नयाँगति लिन लागेको बेला सानातिना कुरालाई बिर्सेर एक भएर जानुपर्छ । जसले राष्ट्रलाई पनि निकास दिन्छ भन्ने मुख्य दर्शन, आदर्शभित्र रहेर हामी साउन १८ र १९ गतेको बैठकबाट एकीकृत भयौं ।
अब त्यस्तो अवस्था हामी मान्दैनौं, जुन जुन सहमति भएको छ त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्छौं । त्यो लागू हुनुपर्छ । हाम्रा नेता, कार्यकर्ताहरु जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको रिहाईको सहमति भएपनि अहिलेसम्म केही भएको छैन । त्यो कामहरु तत्काल गरियोस् भन्ने मागसहित त्यही सहमतिमा टेकेर हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्नेछ ।
आफुङ्गी नै त नभनौं । विश्वका अरु देशका नागरिक नेपालीको स्वभाव मिल्दैन नि ! किनभने हामी अमेरिकामै गएपनि नेपाली हुँ भन्ने गर्व हामीमा रहन्छ । अष्टेलिया, यूकै जहाँ जानुस् नेपालीहरुको आप्mनै स्वभाव हुन्छ । त्यस्तै भूमि हो, लिम्बुवान । लिम्बुवानी जनतामा त्यो केही स्वभाव छ । हिजो हिन्दूधर्मको प्रभाव आयो, बुद्धधर्मको प्रभाव आयो, मुस्लिमको वेव आयो, त्यसको बाबजुद पनि लिम्बुवानमा विश्वको ग्लोबलाइजेसनले कुनै असर पारेन । लिम्बुवानीहरु कुनै डोमिनेसन परेको छैन । त्यसकारण लिम्बुवानी जनतामा एक खालको स्वभाव छ । त्यो एउटा गर्व छ ।
त्यसैले हामी सबैले लिम्बुवानलाई प्राथमिकता दिएका हौं । लिम्बुवान एकताले अन्य तमुवान, मगरात, नेवाः लगायतमा सकारात्मक असर पार्ने विश्वास गरौ । म देश, विदेशमा रहेका सारा नेपालीलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो एकता टुट्ने छैन । कम्तिमा पनि हामी नेपाल र नेपालीलाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउन सक्दैनौं, तबसम्म यो एकता टुट्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
यो कुरा एकदमै आएको छ । भेँडेटारमा हाम्रो पार्टी एकीकरण पछि देश विदेशबाट यो कुरा एकदमै आयो । सबै लिम्बुवानी आन्दोलनका शुभेच्छुकहरुले सबै ठीक छ तर समावेशीकरण भएन भन्नुभएको छ । आफै पहिचान र समावेशी, समानुपातिकको कुरा उठाउने त्यही लिम्बुवानमा पाँचवटा पार्टी मिलेर बन्दा समेत समावेशी नहुनुमा हामीलाई पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले देखिने गरी समावेशी बनाउँछौं ।
पूरै विश्वासै नगरेको त होइन । हाम्रो पार्टी एकीकरण नहुँदैमा पनि चर्चामा थियो । हामीले त्यत्रो मार्चपास, सभा, सम्मेलन, आन्दोलन गर्यौं । विभिन्न चरणमा सरकारसँग वार्ता र सहमति गर्यौं । आन्दोलन नै नउठेको भन्ने होइन । तर, पनि जनताहरुले एकीकृत भएर आऊ, एक भएर आऊ हामी सपोर्ट गछौं भनिरहनुभएको छ ।
बैठकमा यो कुरा जोडतोडले उठेको छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा संघीय शक्ति चाहिन्छ भन्ने । हामी त्यसमा सकारात्मक हुने कुरा भइनै हाल्यो । छलफल चलिरहेको छ र त्यो हुन्छ नै । लिम्बुवान एउटा शक्ति भइहाल्यौं । अब यहाँका सबै संघीय शक्तिहरुलाई जोड्ने एउटा मेकानिज्म हुन्छ । यसअघि पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले त्यसको अभ्यास गरेकै हो । त्यो रहिरहेको भए यतिखेर करिब ६० जना सभासद् हुन्थे । त्यो एउटा जबर्जस्त कन्सेप्ट थियो । त्यसमा केही सुधार गरेर फेरि पनि अगाडि बढ्नेछौ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोट पाउनुको कारण गुजरात मोडेल बन्यो । अहिलेको एकतापछि पनि मगरात, तमुवानले हामीलाई एकता गराउन आइदिनु पर्यो भनिरहेको छ । यो एकताले लिम्बुवानको आन्तरिक राजनीति, विकासलगायत हरेक विषयमा प्रभाव पार्नुपर्यो नि ! हिजो जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा हामी विभाजित भएकाले समस्या परेको थियो । अब गर्ने भनेपछि तत्काल हुने अवस्था बन्छ ।
लिम्बुवानबाट आएका नेतृत्वहरु लिम्बुवानी जनता, दलित, उत्पीडितहरु केही होइनन् भन्ने दिग्भ्रमित सोचमा हुनुहुन्छ । गुजरातका मोदीजी आएर हाइहाइ भएर जानु भो आखिरी उहाँको संसद्को प्रस्तुति । उहाँलाई संघीयताले नै त्यहाँ पुर्याएको छ । लिम्बुवान नदेख्नु भनेको मोतियाविन्दु हुनु हो । मलाई लाग्छ, उहाँहरुको दिग्भ्रम चाँडै नै ठीक ठाउँमा आउनेछ ।
संविधान निर्माणमा हामी एकदमै पोजिटभ छौं र हुनुपर्छ । हामीलाई पहिचानसहितको संघीयता चाहिएको छ । अहिले हामीमुहाली गरिरहेकाहरुलाई होइन, हामीलाई चाहिएको छ । तर सबै पक्षलाई बोलाएर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्यो भन्ने पक्षमा हामी छौं । चुनाव नै सबै चिज होइन । हिजो पञ्चायतले पनि चुनाव जितेको थियो। ज्ञानेन्दैको पालामा पनि चुनाव भयो । चुनावले नै सबै निकास दिने हो भने ०४६ सालदेखिको चुनावले के गर्यो र ? जनयुद्ध, मधेस, आन्दोलन, लिम्बुवान किन भयो त । तर चुनाव नजित्दैमा लिम्बुवानको मुद्दा हार्ने भन्ने होइन । चुनाव त कुन सन्दर्भमा भयो, कसरी षड्यन्त्र भयो भन्ने हो । सर्वपक्षीय सम्मेलन छलफलका हो, हामीले बोलेको कानुन बन्नुपर्यो ।
Last Updated on Sunday, 07 September 2014 21:38
भयवाद विश्वको कान्छो र नौलो दर्शन हो -देश सुब्बा
भयवाद दर्शन विगत १५ वर्षदेखि हङकङमा बसेर देश सुब्बाले भयवाद दर्शनको विकास गरिरहेका छन् । उनै देश सुब्बासँग – भयवाद दर्शन र नेपाली भाषा साहित्यको विषयमा हङकङ नेपाली रेडियो डट्कमका देवराज राईले लिनु भएको अन्तवार्ताको अंश राज्यसत्तामा पनि प्रकाशित गरिएको छ ।
भयवाद दर्शनका लेखक देश सुब्बा
१. देश सुब्बाज्यू तपाईलाई के भनेर बोलाउ ? दार्शनिक, कवि, उपन्यासकार वा लेखक ?
म दार्शनिक, कवि, उपन्यासकार बन्ने खोज्ने सामाग्री हुँ । बनिसकेको छुइनँ । घर बन्नलाई जग, झ्याल, ढोका, छाना, बालुवा, सिमेन्ट, काठ धेरै चाहिन्छ । बनिसकेपछि हामी घर भन्छौं । म पनि दार्शनिक, कवि, उपन्यासकार बन्ने कोशिशमा छु । बनिसकेपछि कुनै नाम आउँला । वैचारिक शक्तिको हिसाबले दार्शनिक शक्तिशाली हुन्छ । दर्शन विशुद्ध विचारको कोष हो । यसमा मनोरञ्जनको मात्रा कम हुन्छ, विचारको खेल बढी । यसमा अर्थको कुरा पनि आउँछ—कसले कसरी बुझेको छ । मैले अर्थ बुझ्नलाई चेतना, ज्ञान, स—संकेतक प्रवृत्ति, वातावरण, घटना भनेको छु । यसैको बुझाइले बन्छ अर्थहरू । यही अर्थहरूले निर्माण गर्छ जीवन र जगत् । कविता, उपन्यास, कथा, नाटकजस्ता साहित्यमा विचार र मनोरञ्जनको सँगम हुन्छ । मेरो निर्माणको यो संक्रमणकाल पूरा भएपछि कसैले दार्शनिक भन्ला, कसैले साहित्यकार । एउटा साँचो कुरा हो, समाजमा धेरै साहित्यकार जन्मिन्छन्, परन्तु विरलै जन्मिन्छन् दार्शनिक । नेपालीमा त दार्शनिक छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले मलाई बोलाउने कुरा पनि यस्तै हो ।
२. भयवाद दर्शनका बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ नि ?
हो बिस्तारै गति लिइरहेको छ । “भयवाद चिन्तन र विमर्श”, “भयवाद वैचारिक चिन्तन”, भयवादमा आधारित उपन्यास “आदिवासी”, भयवादमा समालोचना गरिएको नाटक “हेच्छाकुप्पा” र कवितासंग्रह “वैशको रूख” आइसकेका छन् । कृति आउने क्रम जारी छ । भयवादको मुख्य पुस्तक नेपालीमा अझै पनि आएको छैन । अविस्वासिलो तरीकाले अमेरिकन प्रकाशनबाट भयवाद दर्शन प्रकाशित भएपछि यसको चर्चा चुलिएको छ । कतिलाई अझै विस्वास नै भएको छैन । विस्वास पनि कसरी गर्नु ? नेपाली साहित्यमा हाम्रा साहित्यकारहरू वर्षौदेखि लेखिरहेका छन् । हाड घोटिरहेका छन् । किन्तु बाटो पत्ता लगाएका छैनन् । मुख्य कुरा बाटो हो । बाटो पत्ता लगाइएपछि हिँडिन्छ । भयवादलाई यहाँसम्म पुर्याउन म घोटिएको छु, भयवाद अध्ययन केन्द्र घोटिएकोछ, उता असम भारतबाट रण काफ्ले घोटिएका छन् । यसको चर्चा यताभन्दा उता भारततिर बढी छ । यताबाट छेलिएको छ, उता टल्किन्दैछ । सिक्किम, दार्जिलिङ, असम, मणिपुर, मेघालय, अरूणाचलप्रदेश, नागालैण्ड, म्यान्मारको टमूसम्म छलफल, गोष्ठी भएका छन् । उता असमीस, नेपाली, मणिपुरी, अंग्रेजीमा समाचार, लेख प्रकाशित हुँदै आएको छ । अझै फैलिन्दैछ पर पर । रण काफ्लेले त बसिबियाँलो भनेर भयवादको प्रचारप्रसार गर्न नियमित कार्यक्रम नै चलाउँदै छन् । यी कारणहरूले चर्चा चुलिएको छ । अझै चर्चा पाउनेमा म आशावादी छु ।
३. भयवाद के हो ?
भयवाद विशुद्ध दर्शन हो । यसमा भयको विस्तृत वर्णन छ । आदिमकालबाट हामीसित भय थियो । हामीसित भएको भयलाई हाम्रा दार्शनिक, साहित्यकार, संगीतकार, कलाकारले नकरात्मक ढंगले मात्र व्याख्या गरे, वास्तवमा भय चेतनाहरूमा सबैभन्दा जेठो चेतना हो । यही भय चेतनाले हामी सञ्चालित, निर्देशित र नियन्त्रित छौं । हाम्रा आविष्कार, निर्माण सबै भयचेतनाका उपज हुन् । प्रहरी, सेना, अस्पताल, कानुन, समाज, अदालत, सरकार विद्यालय, बिमा, बैंक सबै नै भयलाई न्युन गर्न स्थापना भएका हुन् । यी सबैको पछाडि मृत्यु भय, प्रतिष्ठा भय, रोग लाग्ने भय, सम्पत्ति नासिने भय, समाज भाँडिने भय छन् । मैले भयवादमा सुत्रबद्ध व्याख्या गरेको छु । धेरै दर्शनको आधार भय भेटेकोछु । यस्तै भयले भय रोगी हुन्छन् भनेको छु । भय रोगी फैलिन्छ, त्यसकारण यसको उपचारको लागि अब छुट्टै अस्पताल, औषधि र डाक्टर हुनुपर्छ भनेको छु । अवसाद, तनाव, आत्महत्या, युद्ध, चिन्ता, मानसिक रोग सबैको 'माउ' भय हो । यो यथार्थ पनि हो । मैले भयको क्षेत्रफल, आयतन मात्र हुन्छ भनेको छुइनँ यसको प्राथमिक र माध्यमिक उपचार बारेमा पनि बताएको छु । यस्तो धेरै भय वर्णनको समग्र रूप हो भयवाद ।
४. भयवाद दर्शनको उपयोगिता क–कसलाई हुन्छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपयोगिताको कुरा हो । भय क—कसलाई हुन्छ, कुन वर्ग र जातिकोलाई हुन्छ ? कुन उमेरकोलाई हुन्छ भन्ने प्रश्नमा हामी अल्मलिएका हुन सक्छौं । उपयोगिता जान्न अगाडि भय कसलाई हुन्छ भन्ने जान्न जरूरी छ । चेतनाको मात्र अनुसार सबै वनस्पति, प्राणी र मानिसहरूलाई भय हुन्छ । त्यसमा पनि विशेष वयस्क मानिसलाई । उनीहरूको जिम्मेवारी, कर्तव्य, प्रतिष्ठा कम उमेरका र वृद्धहरूभन्दा बढी हुन्छ, त्यसैले उनीहरूको भय पनि बढी हुन्छ । यो फैलिन्दै जाँदा भय रोग वा अन्य समस्या बन्छ । यसको उपयोग त प्राणी, वनस्पतिदेखि मानिसलाई हुन्छ । यसको आधार चेतना हो । चेतनासँगै काम, कर्तव्य, जिम्मेवार, दायित्व, प्रतिष्ठा बढी भएको मानिसलाई बढी भय हुन्छ । जसलाई बढी भय हुन्छ उसलाई नै यो सिद्धान्त बढी उपयोगी हुन्छ, त्यसमा मानिसदेखि पशुप्राणी सबै पर्छन् ।
५. विश्वसाहित्यमा भयवाद दर्शन नौलो दर्शन हो त ?
भय दार्शनिक, साहित्यकार, चिकित्सकहरूले धेरै अगाडिबाट प्रयोग गर्दै आएको शब्द हो । अगाडिका दिनहरूमा भयलाई नकारात्मक र सानो आकारमा लिइएको पाइन्छ । पश्चिममा फोयिबा भनेका छन् । पूर्वमा रस सिद्धान्तमा राखेर आचार्य भरतले भय रसको व्याख्या गरे । यी सानो बिरूवालाई मैले गोडमेल गर्दै, मलजल गर्दै ल्याएको छु । अहिले यो वयस्क भएको छ । फुल्न खोज्दैछ । हिजो सानो आकारमा भएको यो दर्शनले विश्वमा नै नौलो दर्शनको रूप लिने कोशिश गरिरहेको छ । यो भन्दा अगाडि भयलाई मुख्य विषय बनाएर कसैले लेखेको, बोलेको भेटिएको छैन । भयबारेमा सानोतिनो लेख हामी भेटछौं । यही हो पहिलो पटक दर्शनको रूपमा आएको । त्यसैले यसलाई विश्वको सबैभन्दा कान्छो र नौलो दर्शन भन्दा अतिश्योक्ती नहोला ।
६. नेपाली साहित्य क्षेत्रमा भयवाद दर्शनको महत्व के छ ?
नेपाली साहित्यमा मात्र होइन, यसलाई अब विश्व साहित्य, कला, सँस्कृति, संगीत, समालोचना, विज्ञान र जीवनसँग राखेर हेर्नुपर्छ । यसको उपस्थिति चारैतिर छ । जहाँसम्म नेपालीको प्रश्न छ, यसको ठूलो महत्व छ । नेपाली साहित्य विश्व साहित्यको ऋणमा डुबेको छ । त्यो ऋणको व्याज तिर्न भयवादले मद्दत गर्दछ । “हामीसित पनि भयवाद छ” भनेर छाती चौडा पार्न सकिन्छ । जीवन र जगत्लाई आयातित चश्माहरूले मात्र हेरियो । अब मौलिक चश्माले हेर्न सकिन्छ । नेपाली साहित्यबाट अहिलेसम्म खासै शक्तिशाली विचार, साहित्य विश्वमा गएको छैन । कथा, उपन्यास, कविता गएका छन् । यसले टालोको काम गरिरहेको छ । शक्तिशाली विचार यो पहिलो हो । पहिलोको जहिलेपनि विशिष्ट स्थान हुन्छ । सगरमाथा पहिलो पटक तेन्जिङ सेर्पाले चढे, बाटो बनाए । अहिले धेरैले चढिसके । तेन्जिङ सेर्पाको स्थान सधैं सुरक्षित रहन्छ । त्यो पाइला कसैले मेटन सक्दैन । भयवाद पनि यस्तै हो जस्ता लाग्छ ।
७. भयवाद अध्ययन केन्द्र के गर्दैछ ? भयवादलाई विकास गर्न स्थापना भएको संस्था हो 'भयवाद अध्ययन केन्द्र' । हामी यसलाई संस्थागत गर्न खोजिरहेका छौं । कार्यक्रम गरिरहेका छौं । छलफल चलाइरहेका छौं । पुस्तक, पुस्तिका, प्रकाशन गर्दैछौं । पुरस्कार स्थापना गरेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । समग्रमा अध्ययन केन्द्र भयवाद दर्शनको विकासमा लागिरहेको छ ।
८. उत्तर भारतमा भयवाद दर्शनले धेरै चर्चा पाउनुको कारण के होला ?
उत्तरभारतमा भयवादले धेरै चर्चा पाउनुको कारण रण काफ्ले हुन् । उनी असम कार्विआङलाङ जिल्लाका बासिन्दा हुन् । उनले यसलाई फैलाउन अथक प्रयास गरिरहेका छन् । लेख लेखिरहेका छन्, बसिबियाँलो कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । यही बसिबियाँलोको कार्यक्रम गर्दै असमको विभिन्न जिल्ला, नागालैण्ड, मणिपुर, म्यान्मार, मेघालय, दार्जिलिङ्ग, सिलगुडी पुगिरहेका छन् । कहिले उत्तरपूर्वका विद्वान्हरूलाई भेला गरेर गोष्ठी, सेमिनार गरिरहेका छन् । उहाँकै संयोजकत्वमा २०१३ सालमा धरानमा एक अन्तर्राराष्ट्रिय कार्यक्रम सम्पन्न भयो । यो कार्यक्रममा गैर नेपालीहरूको ज्यादा उपस्थिति थियो । उनले नै भयवादमा लेखिएका समाचार पत्रिका, पुस्तक बाँडिरहेका छन् । उनको एक्लो प्रयासले उत्तरपूर्वका नेपाली, गैर नेपाली धेरै साहित्यकार, पत्रकार, प्राज्ञिकहरू भयवादप्रति आकर्षित भएका छन् । उनलाई साथ दिने एकदुईजना भए यसले निकै उचाइ प्राप्त गरिसक्थ्यो । तथापि यति छोटो समयमा यतिको उचाइ सन्तोषजनक नै छ । भयवादसँग नेपाली गैर नेपाली धेरै सहमत छन् । धेरैले नौलो दर्शन मानिरहेका छन् । त्यहाँ यसले लोकप्रियता पाउनुको अर्को कारण अस्तित्व संकटको भय पनि हो । नेपालमा त्यो अवस्था छैन र प्रभाव कम छ ।
९. भयवादको नयाँ संस्करण फिलोसोफी अफ फियरीज्मको अंग्रेजी प्रकाशनले एक प्रकारको तरंग उत्पन्न गरेको छ नी ?
तरङ्ग उत्पन्न गर्ने केही काम म आफै गरिरहेको छु, धेरै साथीहरूले सहयोग गर्नु भएको छ । केही प्रकाशकले । प्रकाशकको तर्फबाट हुनुपर्ने प्रबद्र्धनको काम हुन अझै बाँकी छ । तयारी हुँदैछ । अन्तर्राराष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीमा सहभागी, ५०० वटा प्रेस रिलिज, रिभ्यू, र वेवसाइडको काम हुँदैछ । विषय वस्तुको गाम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर त्यही स्तरको प्रकाशन र प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यही अनुरूप काम अगाडि बढिरहेको छ । यो वर्षमा यी काम सम्पन्न हुन्छन् । अनि मात्र पुस्तक कस्तो भयो, यसको महत्व कस्तो छ ? विश्व दर्शन, साहित्यमा यसको स्थान कहाँ छ ? मूल्याङ्कन हुन्छ । अहिले त यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन ।
१०. नेपाली साहित्य, दर्शनमा यस्तो देखिएको छैन तपाईको कसरी संभव भयो ?
कोशिश गर्दै गएपछि बाटो बन्दै जान्छ । मैले पनि कोशिश गरिरहेँ । अनलाइन प्रकाशक खोज्न थालें । मेघालय भारतकी प्रा.डा. स्टीमलेट डखारले पनि भारतको प्रकाशक खोज्न सहयोग गरिन् । तर भारतको प्रकाशकले प्रकाशन गर्न अस्वीकार गर्यो । नेपाली प्रकाशकहरूले अस्वीकार गरिरहेका छन् । हल्काफुल्काको बजार भएको ठाउँमा यस्तो गम्भीर विषयले प्रवेश पाउने कुरा पनि भएन । अहिलेको समय साइबरको हो । अनलाइनमा ठगहरूको पनि त्यतिकै बिगबिगी छ । त्यहाँ धेरै प्रकाशक भेटिन्छन् । तर इमान्दार पाउन गाह्रो छ । त्यही पनि खोजी जारी राखें । लामो समयको खोजपछि अहिलेको प्रकाशक भेटें । त्यति सजिलै विस्वास गर्ने कुरा भएन । बेलायतको प्रकाशकबाट पनि प्रस्ताव आयो । मलाई बेलायतको प्रस्ताव उचित लागेन । अहिले प्रकाशन गर्ने अमेरिकन प्रकाशकबाट काम गर्न थालें । मनमा त्रास थियो नै । छापिन्छ कि छापिन्दैन । ठगाइमा परिन्छ कि ? पुस्तक नै हातमा नपरिन्जेल मैले यसलाई बाहिर पनि ल्याइनँ । किनभने प्रतिष्ठा डुबाउने धेरै माफिया हुन्छन् । ती सबैबाट जोगिनै पर्यो । अन्तोगत्वा यहाँसम्म पुगें । अहिले म के बुझ्दैछु भने कुनै पनि कामको एउटा सिस्टम हुन्छ । यिनीहरूसँग सिस्टम छ । चारैतिर हाँगाबिँगा फैलाएर बसेका छन् । यिनीहरूको बाटोबाट हिँडियो भने विश्व बजारमा पुग्न छिटो र सजिलो हुँदोरहेछ । आफै गर्न खोजियो भने यो ब्राह्मण्डमा हराइन्छ ।
११. देश सुब्बाज्यू तपाईको कविता कर्मका बारेमा केही भन्नुहोस न ?
कुनै विषय वस्तुले प्रभाव पार्यो भने कहिलेकहीँ कविता लेख्छु । एक समय हङकङको नेपाली साहित्य निस्क्रिय भएको थियो । त्यो बेला यहाँको साथीहरूलाई सक्रिय बनाउन रेखा कविता लेख्न थालें । रेखा कविताले पनि केही उत्साह ल्यायो । बिस्तारै जीवन र जगत्लाई हेर्न दृष्टिकोण बनायो । टंक सम्बाहाम्फे लगायतका केही साथीहरू रेखा कविता लेखिरहेका छन् । म पनि लेख्छु । बीचमा दश वर्ष लगाएर चार सय पानाको अनौठो पाराको महाकाव्य लेखें । छापिएको छैन । कुनै दिन आउला त्यसको पालो । समय समयमा समकालिक कविता लेखिरहेको छु । कविता लेख्न पनि मलाई रमाइलो लाग्छ ।
१३. कुनै मुलुकमा नेपाली समाज स्थापनाका लागि हामी के गर्न सक्छौं ?
समाज स्थापना भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपाली समाज भनेर जब हामी भन्छौं, त्यो समाजको आधार चाहिन्छ । जुन समाजको भाषालिपि, धर्मसंस्कार मजबूत हुन्छ, त्यो समाजको अस्तित्व बलियो हुन्छ । समाजको अस्तित्व र पहिचानको कुरा आउँछ । आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक मजबूतीको कुरा पनि आउँछ । हामी विभिन्न मुलुकमा अल्पसंख्यक संक्रमक कालबाट गुज्रिरहेका छौं । समाज स्थापना, मजबुती भन्दा पनि डार्बिनले भनेजस्तै बाँच्नको लागि संघर्ष चलिरहेको छ । यस्तै कुरालाई अब्राहम मास्लोले आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर व्याख्या गरे । यी सबै भयमा गएर अडिन्छ । खाने, बस्ने र सुरक्षाको स्थिरता नआइ अरू काम गर्न सकिन्न । अहिलेसम्म पनि हाम्रो मानसिकताले त्यसैको खोज गरिरहेको छ । यसमा स्थिरता आएको दिन समाज एक किसिमले स्थापित भएको मान्न सकिन्छ ।
१३. नेपाली भाषाका लागि के गर्न सकिन्छ ?
कुनै पनि भाषालाई मजबुत गर्न सक्दो बढी प्रयोगमा आउनुपर्छ । जति सरकारी भाषासँग यसको नजिकको सम्बन्ध गाँसिन्छ, उति नै आयु लामो हुन्छ । विश्वको जुनसुकै मुलुकमा जुन भाषाले संविधान, सरकारी कामकाज, शिक्षा, नीति पत्रपत्रिकामा पुस्तक प्रकाशनमा स्थान पायो त्यो भाषा मजबुत हुँदै जान्छ । यसको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट हामीले आफै यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सहुलियत दिएको छ । कतिपय मुलुकमा छैन । देशको कानुनको परिधिमा रहेर हामीले नेपाली भाषालाई संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नुपछ । त्यो भन्दा अर्को विकल्प छैन ।
Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 14:55
यूकेमा ३२औँ मगर दिवस ,भिडीयो अन्तरबार्तामा खपांगी बारे एक 'नाटक '
बिजय हितान मगर
(रङमन्चको एक कुर्चिमा हिमाली (हिमाली राना- उपाध्यक्ष मगर संघ यु के)बसेकी हुन्छिन । अगाडी टेबलमा दुई माइक तेस्राइएको हुन्छ । अर्को कुर्ची खाली छ। मगर् भेस भुसामा सेतै दाह्रारी जुङामा लौरो टेक्दै एक ब्रिद गोरेबहादुर खपाङी (बिजय हितान सचिव-मगर संघ यु.के) भित्र आउँछन । )
(यो भिडीयो ऐभरेस्ट टाइम्समा प्रकाशित,बिजय हितान बाट प्राप्त भएको)
१. हिमाली- जनजातिका सर्बोच नेताज्यु, नमस्कार् (कानुङ जनजातियो बडा नेता ज्युके ङै झोर्लाङ ) । एम टी भी मा स्वागत याँहालाई (एम टी भी ना को के स्वागत ले) । कृपया बस्नोस (इलाक मुनिस) ।
२. गोरे- धन्यबाद् (ना को के र धन्यबाद् ले ) । यो सर्बोच भनेर किन भनेको मलाइ (ना कोइ ना के हि के बडा भर्मी डे च्याले) ? म जस्तो चान्चुने नेतालाई । अनी हिमाली यो एम टी भी भन्या के?
३. हिमाली- जननायक बिसेस्वर प्रसाद, सर्बमान्य नेता गणेसमान, इत्यादी भन्न हुने । तपाइ जस्तो झन्डै ८५ लाख अर्थात नेपालको ३७ प्रतिसत जनजातिहरूको नेतालाई किन सर्बोच नेता भन्न नहुने ? नेपालमा हामि जनजातिको न त सन्चार कर्मी छन् न त सन्चारका मादयामहरू । त्यसैलाई बिचारेर हामिले एम टी भी खोल्या ।
४. गोरे- के त नी यसको माने?
५. हिमाली- मगर् टेलिभिजन । हामि मगरहरूले लगानी लगाएर खोलेको संचार माध्यम।
६. गोरे- ल खुशी लाग्यो । सुभकामना छ । अब, बल्ल, थेप्चो नाख र चिम्सा आँखाका अनुहारहरुपनी हेर्न पाइने भयो टेलिभिजनमा ।
७. हिमाली- अनी तपाईंको स्वास्थ्य कस्तो छ? धेरै बिसेक भएछ ऐले ।
८. गोरे- त्यति राम्रो अझै भा छैन् । मगर् दिवस भनेर सकी न सकी आ । अस्पतालको वार्ड बाटै आएको ऐले । जे होस तपाईंहरू यू के मगर् संघको आर्थिक सहयोग प्रति धेरै आभारी छू । तपाईंहरूको सहयोगले मलाइ सिङापुर उपचारार्थ लग्न सम्भव भयो । अनी बल्ल मेरो होस आउन सक्यो । अन्यथा म कोमा मै हुन्थे होला र यो अन्तर्वार्ता कहाँ गर्न पाइने ?
९. हिमाली- हामिले तपाईंको उपचार्थ आर्थिक सहयोग त गर्यौं तर याँहा कतिलाई था छैन तपाईं कसरी दुर्घटनामा पर्नुभयो । भयो के बताइदिनु हुन्छ की ?
१०. गोरे- त्यो दिन हाम्रा सन्जोग लाफा जी ले बिस्व आदिबासी फिल्म महोत्सव आयोजना गर्नुभएको थियो काठमान्डुमा। मलाइ मुख्य अतिथिको निमन्त्रणा थियो। सभा ग्रिह्यको बाहिर सडकमा बसबाट झरेर बाटो काटने क्रममा मोटरसाइकलले ड्वाममै हानी थियो ।
११. हिमाली- तपाईं जनजातिको यत्रो नेता, तपाईंलाई मार्ने कुनै सडयन्त्र रचिएको त होईन ?
१२. गोरे- एक मुस्लीम समुदायका ब्यक्तिले चलाएको मोटरसाइकलको धक्काले मेरो दुर्घटना हुन गयो। पुलिसले उनलाई समातेर छान्बिन गरे, जरिवाना र जेल सँजाए दिए। त्यस्तो शँका गर्न सकिने आधार केही पाइएन ।
१३. हिमाली- अब हामि मुख्य बिषयमा प्रबेस गरौं गोरेबहादुर ज्यु । यस ३२ औं मगर् दिवसको सन्दर्भमा यो कहीले र कँहा देखि सुरु भयो र यसको महत्वको बारेमा प्रकास पारिदिनुहुन्छ की?
१४. गोरे- फागुन १५/१६ बी.स २०३९ सालमा नेपाल् मगर संघको पहिलो महा-अधिबेसन तनहुँ जिल्लाको दमौलिमा बस्यो । फागुन १५ लाई मगर् दिवसको रुपमा लीइन्छ, याँहालाई थाहै छ । (दमौलिका कोहि हुनुहुन्छ ?) अब मगर् दिवसको महत्वको बारेमा कुरा गर्दा यसले नेपाल् भरिका के अठार मगरात के बाह्रर मगराँतका मगरहरु, के पुर्बका मगरहरु के पुन मगरहरु, के खाम काइके छन्त्याल के बाह्र मगरातमा बोलिने मगर् भाषा; सबैलाई एकताको सुत्रमा बाँधने काम गर्छ जस्तो मलाइ लाग्छ। साथै हाम्रो भाषा भेस भुसा संस्क्रिती सम्रछण, इतिहासको खोजी र आफ्नो पहिचान खोज्दै अधिकार प्राप्तीको लागि यसले मद्घत पुर्याउँछ।
१५. हिमाली- याँहालाई थाहै छ मगरहरु स्यानो भेला भयोकी त नाच गाना गर्ने र पिउने मात्रै गर्छन्। भासण र ग्यानका कुरा गर्ने भनेर कार्यक्रम राख्यो भने त हाम्रा मान्छेहरू उपस्थित नै हुन्नन्। यो तपाईंले भनेजस्तो हाम्रो संस्क्रितीको सम्मरछण र अधिकार प्राप्ती कसरी सम्भव होला त ?
१६. गोरे- हो म स्विकार्छु यो कुरो । तर यस्तै कार्यक्रमको मार्फत उनिहरुलाई अली अली भएनी सिछ्या दिलाउन तपाइहरुजस्तो संघमा बसेर कामगर्नेहरूले छोड्न हुन्न ।
१७. हिमाली- हो आज पनि सँसारै भरीका मगरहरूले मगर् दिवस मनाउँदै छन् । उनिहरुले केही बुझुन् हाम्रो इतिहास भनेर तपाईंलाई याँहा दु:ख दिएको । तपाईंको अन्तर्वार्ता आज प्रतछ्य हेरी राछन बेलायतमा पनि।
१८. गोरे- हुन्छ बेलायत लगाएत सँसारका मगरहरुलाई मेरो झोर्ले र सुभकामना !
१९. हिमाली- २०३९ साल भन्दा अगाडीको मगर् संघको बारेमा केही जानकारि दिनुहुन्छकी हाम्रा दर्सकलाई ?
२०. गोरे- हामिहरू रास्ट्रिय स्तरमा सङठित हुन गएको बिक्रम सम्बत २०१४ सालदेखी देखिन्छ । १४ सालमा गुल्मी जिल्लाको भार्सेमा मगर् समाज सुधार संघको नामले ब्रिहत सम्मेलन भएको देखिन्छ। त्यसपछि बिक्रम सम्बत २०२८ सालमा काठमान्डुमा राजदुत हर्क बहादुर थापाको सक्रियतामा 'लांघाली परिवार' खोलिएको र सम्मेलन गरिएको इतिहासले बताउँछ ।
हर्क बहादुरको म्रित्युपछी वाँहाको नाममा रु १,००० को 'हर्क पुरस्कार्' स्थापना गरियो। बर्सेनी मगर् समुदायको पुनरुथ्थानमा बिशेष योगदान पुर्यए बापत यो पुरस्कार मगर् संघले बितरण गर्दै आएको छ। मैले सम्झेसम्म २०४१ हर्कपुरस्कारद्वारा सम्मानित मगर् आदिकबी स्याङ्जा निवासी जित बहादुर सिङ्जाली, २०४८ को हर्क पुरस्कार मगराँती भाषा साहित्यमा योगदान पुर्यए बापत सह प्रध्यापक स्याङ्जा निवासी लोकबहादुर थापामगर्, २०५७ को हर्क पुरस्कार पहिलो महाधिबेसनका सम्योजक त्यसपछि ३/३ कार्यकालसम्म केन्द्रिय सचिव र मगर् सँस्क्रित तथा ईतिहास परिषद का अध्यक्ष रहनुभएका जय बहादुर हितान। त्यसपछि २०३८ साल माघ २८/२९ मा रुपन्देहि बुटवलमा 'कानुङ लाङ्हाली परिवार'ले बाबुरामा रानाको अध्यक्षतामा ब्रिहत राष्ट्रिय भेला गरि एक रास्ट्रिय तदर्थ समिति गठन गर्यो । फल्सरुप त्यसको एक बर्ष पछि २०३९ मा रास्ट्रिय महादिबेसन गराई नेपाल् लाँघाली परिवार संघ गठन ।
२१. हिमालि- म पनि दमौलीको पहिलो रास्ट्रिय महाधिवेसनमा गएकी थिएँ, याँहालाई ती छणको केही सम्झना आउँछ होला नी ?
२२. गोरे- हो, त्यो दिन ४ हजार भन्दा बढी दमौली वरिपरिका र नेपाल् भरिका मगरहरूको उपस्थिती थियो। एक दर्जन जिल्लाहरुमा लांघाली परिवार संघ खुलिसकेका थिए। तिनका प्रतिनिधि साथै जुन ठाउँमा मगरहरुको जनघन्त्व छ त्त्याँहा संगठन न भएनी कोही प्रतिनिधि बनेर आएका थिए। त्यसैगरी अन्य जनजातिका संगठनहरु, दार्जलिङ र सिक्कीम मगर् संघका प्रतिनिधिहरूको पनि बाक्लो उपस्थिती थियो। फागुन को मौसम जाडो थियो। स्वागत उपसमिति, बसोबास उपसमिति, प्रबन्धक उपसमितिका साथिहरूले खुबै दुक्ख गर्नुभहेको थियो। बेलुका साँस्कृतिक उपसमितिद्वारा प्रस्तुत सोरठि, घाटु, कौडा नाच हेरेर मनोरन्ज लिएका थियौं। पञ्चायत सरकारले हाम्रो सङठनलाई साम्प्रदायिक सम्झन्थ्यो र केही बर्दीवाला पुलिसका साथै सी आइ डी पनि तैनाथ थिए।
२३. हिमाली- तपाईं २०४८ को चौथो महाधिबेसन पछि ४ कार्यकालसम्म मगर् संघलाई अध्धछ्य भएर डोराएको त हामि सबैलाई बिधितै छ। उक्त प्रथम महादिबेसनमा यँहाको भूमिका कस्तो रह्यो ? २
४. गोरे- २०३८को तदर्थ समिति जसमा हेम बहादुर पुन अद्धछ्य, राण बहादुर आले उपाध्छ्य, सुरेस आले सचिव, जयबहादुर हितान उपसचिव, मनबिर गर्बुजा कोसाध्छ्य, एम एस थापा सदस्य लगायत ९ जनाको तदर्थ समितिमा त म बसेर काम गरिन। प्रायजसो यी तदर्थ समितिका साथिहरू नै नयाँ केन्द्रिय समितिमा चयन् भए। जसले हेम बहादुर पुन ज्युको अद्धछ्यतामा पहिलोपल्ट रास्ट्रिय स्तरको कार्य समिति चयन् गर्यो ।
हेमबहादुर पुनजी संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । म भने उक्त समिताको एक सदस्य बने। त्यसपछि २०४२ सालको महाधिबेसन हेटौंडामा कबिराज पुन जी, २०४५ को नेपालगन्ज महाधिबेसनमा मानध्वज रानालाई अद्धछ्य बनाइयो। वाँहा दुबैको कार्यकालमा म सदस्य भएर काम गरे। २०४५ मा मगर् भाषा तथा लिपी परिषद खडा गरियो। केसरजङ बराल जी ले अद्धक्य गरेको उक्त समितिमा म सदस्य भएर मगर् भाषा बचाउ आन्दोलनमा अनवरत लागियो।
२५. हिमाली- अनी २०४८ को काठमाण्डौ महाधिवेसनले तपाईंलाई एकैचोटी अध्यछ्य बनायो? तपाईं भन्दा माथिका साथीहरू जस्तै कोसाधछ्य मनबिर गर्बुजा, सचिव जय बहादुर हितान्, महासचिव सुरेश आले, उपाधछ्य रणबहादुर आले अध्धछ्यमा उठन खोज्नु भएन?
२६. गोरे- हो म अद्धछ्य बनाइएँ। वाँहारु कोहि मावोबादिमा, कोहि नेपालि काङ्रेसमा लाग्नु भएको थियो। म भने एमाले परित्याग गरेर मगर तथा जनजातिलाई हक र अधिकार दिलाउने र सिँहदरबारमा पुर्याउने हेतुले २०४७ मा जनमुक्ती पार्टी दर्ता गरेका थियौं। सायद मगर् बन्धुहरूले यसलाई मगर संघको अद्धछ्य बनाए केही गर्छ भनेर होला मलाइ नै बनायियो। यो क्रम आठौ महाधिबेसन २०६० सम्म कायम रह्यो। कैलाली, टिकापुर मा भएको महाधिबेसन पछि यमबहादुर बुढाथोकीलाई अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरेर म बाहिरिएको हो।
२७. हिमाली- त्यसपछि नवौँ महाधिवेसन २०६४ काठमान्डुले झकबहादुर र हालैको २०६८को दसौं महाधिवेसनले महेन्द्र थापालाई अद्धछ्य बनाएको छ हैन त ?
२८. गोरे- हो, सहि हो।
२९. हिमाली- तपाईंको पालापछि मगर् संघ यति ब्रिहत भयोकी यसलाई समाली नसक्नु भएको जस्तो हामिलाइ लागेको छ। नेपालको ७५ वटै जिल्ला, भारत, हङकङ, जपान, बेलायत, अमेरिका, बेल्जियम, क्यानेडा, पोर्तुगलमा साखा छन् । १३ वोटा भात्रु सङठन ६० वटा जिल्ला र ५०० भन्दा बढी क्याम्पस बिस्वबिध्यालयमा मगर बिध्यार्थि सङठन, इत्यादी खोलिएका छन् । अन्त्यमा तपाईंको बिचारमा समग्रमा नेपाल् मगर् संघ गठन भएदेखि मगरले के उन्नति गरे र अब के गर्नु पर्छ?
३०. गोरे- बडो गहकिलो प्रश्न गर्नु भो। छोटकरिमा भन्नुपर्दा- हामीमा २०३९ सालभन्दा यता सामाजिक राजनैतिक चेतना ब्रिदी भैसकेको छ। सामाजिक चेतना भन्नाले हाम्रो भेस भुसा भाषा संस्क्रिती बचाउन पर्छ, हामि दबेर दबाइएर बसेका रहेछौं, हाम्रो इतिहास लुकेको र लुकाइएको रहेछ्; र राजनैतिक चेतना भन्नाले हाम्रो पहिचान के हो हामि राज्यसत्तामा पुग्न पर्छ र त्यसमा हाम्रो समान हक र अधिकार हुनपर्छ भन्ने चेतना ।
त्यसैले हामिलाई रिअलाइजेसन भयो र हामि ट्रान्सफरमेसनको फेजमा छौं। राजनैतीक चेतना बिना हाम्रो पहिचान बचाउन सकिदैन। ३० बर्ष अगाडी त हामि समाजमा कुन स्तरमा छौं, हामि को हौं भन्ने रिअलाइजेसन नै हामीमा थिएन। ऐले यो हुनु नेपाल् मगर् संघ ठुलो उपलब्धी हो । तर एउटा कुरा के भन्छु भने यदि यस्तो आन्दोलन अरु जात या बर्गमा गरिएको भए उनिहरु चन्द्रमामा पुग्थे। त्यसैले होला मगर ढिला हुन्छन् भनेका। तर खैर, फिक्कर छैन्, हामिले धैर्य धारण गरेर अगाडी कछुवाको चालमै किन न होस अगाडी बढनै पर्छ ।
अब के गर्नु पर्छ भने हाम्रा मुल्य र मान्यतालाई कायमै राख्दै भुमन्डलीकरणको परिबेसमा हाम्रा सन्तानलाई बैग्यानिक र ब्याबसाइक सिछ्या तीर उन्मुख गराउने साथै आर्थिक उन्नतिको आन्दोलन ल्याउँदा ठीक हुन्छ जस्तो मलाइ लाग्छ । आजकल् राजनैतिक मुद्दालाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको र यी कुरालाई पटक्कै नसमेटेको जस्तो आम मगरहरूलाई भान भैराछ। अझ तपाइँहरुजस्ता बिदेसमा बस्नेले त यी दुई बिषयमा छीट्टै बिकास गर्ने सम्भावना म देक्छु। उदाहरणको लागि नेवारी समाज । तिनीहरूमा दछ्य जनसक्ती छ, सैछिक र आर्थिक तवरले त्यतिकै बलिया छन्। त्यसो त राजनितिमा पनि उनिहरु अगाडी छन्। अब मगर्हरूले पनि यिनै समाजको परिकल्पना गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाइ लाग्छ।
३१. गोरे- अर्को कुरा हाम्रा महिलाहरू रास्ट्रिय स्तरका लिडर भएका हामि देख्दैनौं । हो तल्लो स्तरमा त सहभागिता सन्तोष जनक छ आजकल् । सुनेको छू यु.के मा महिला उपाद्ध्यछ हुनुहुन्छ, हङ्कङमा त अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ महिला । अबको ५ बर्षमा नेपाल् मगर संघले महिलाको नेत्रुत्व पाउनपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । हजुरको के छ यसमा बिचार्?
३२. हिमाली- थुप्रै कारणहरू छन्......... पुरुषहरूको साथ पाए मगर् महिलाले लिड गर्न असम्भव छैन, योग्य महिलाहरू थुप्रै छन्। ......
३३. हिमालि- हुन्छ त धन्यबाद् याँहालाइ।
३४. गोरे- ल याँहालाई पनि मेरो गिरिङ गिरिङ लास्सो ! जय मगर ।
(गोरेबहादुर उठेर बाहिरिन्छन, रङमन्चको पर्दा बन्द हुन्छ)
(३२ औँ मगर् दिवसको उपलक्षमा लिखित यस नाटकलाई यु.के मगर् संघको मगर दिवस कार्यक्रममा मन्चन गरिएको थियो । ) फोटो तथा भिडीयो ऐभरेष्ट टाईम्स ,यूके
Last Updated on Sunday, 22 June 2014 13:51
म बेसाहाराकी आमा–इन्दिरा राना मगर
बाहुन युवाहरु बुझ्दैछन् 'बाहुनवाद'- प्रख्यात समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्ट
हङकङका तमु मिल्छन्, म सम्झाउँछु - रेशम तमु
अब पनि पहिचानवादी शक्ति नमिल्ने हो भने सखाप हुन्छौ – शिवलाल थापा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजमुपा